Fiber Optical Mugamuchiri Vagadziri & Vatengesi | China Fiber Optical Mugamuchiri Fekitori
1. Chigadzirwa Pfupiso ZBR1001JL optical receiver ndiyo ichangoburwa 1GHz FTTB optical receiver. Iine huwandu hwakawanda hwekugamuchira simba remaziso, yakakwira kuburitsa nhanho uye yakaderera simba rekushandisa. Iyo ndiyo yakanaka michina yekuvaka yepamusoro-performance NGB network. 2. Hunhu hweKushandisa ■ Downlink inoshanda frequency yakawedzerwa kune 1GHz, RF gudzazwi chikamu chinotora hi ...
EATURES ■ xPON Pfuura Nayo ■ AGC Kushanda ■ Burst Mode Operation ■ Inotsigira DOCSIS 3.0 kana 3.1 ■ LED Zviratidzo zveMagetsi ON, Inesarudzo Simba uye Kudzorera Tx ■ -20dB Kuedza Port ■ 12VDC Simba Adapter ■ Inotevera SCTE 174 zviyero Zvikumbiro ■ CATV, HFC network ■ RF pamusoro peGirazi Tsananguro PL10-4A compact optical node ndiyo yakanaka chikuva yekushandisa muFTTH neFTTB network, kuendesa kumusoro nekudzika DOCSIS, izwi, vhidhiyo uye nekukurumidza kumhanya data sevhisi pamusoro peFTTX kunyorera.PL10-4A ine otom ...
ZHR1000SD FTTH High Chikamu Optical Mugamuchiri
1 Chigadzirwa tsananguro ZHR1000SD FTTH Optical inogamuchira yakanyatsogadzirirwa CATV FTTH network. Chinhu chayo chikuru kushomeka kwesimba kwesimba, AGC Optical inogara yakabuda nhanho kuburitsa, diki Vhoriyamu uye yakanyanya kuvimbika. Kugamuchira aluminium alloy shell, ine optical control AGC wedunhu yakavakirwa mukati, compact dhizaini uye ekunze modular magetsi magetsi anoita kuti kumisikidza uye kugadzirisa mamiriro kuve nyore. Icho chigadzirwa chakanakira kuvaka FTTH CATV network. 2. Chigadzirwa chinowanikwa 1. Inotora GaAs module seRF ampli ...
Dual Inzwa Zvinotaurwa Optical mugamuchiri ZBR202
ZBR202 optical receiver ndiyo nyowani 1GHz mbiri-nzira switch optical receiver. Nesimba rakasiyana renji rekugamuchira simba, yakakwira kuburitsa nhanho, yakaderera simba rekushandisa uye compact chimiro, zviri nyore kuisa. Iyo yekuvaka-mune yemagetsi switch, kana imwe nzira ikakundikana kana pazasi peiyo yakatarwa chikwangwani, chishandiso chinongoerekana chachinjira kune imwe nzira yekuona yakajairika mashandiro emidziyo. Iyo ndiyo yakanaka michina yekuvaka yepamusoro-performance NGB network. Zvimiro 1.Adopt advanced Optical AGC maitiro; 2.Vaviri ...
ZVIMWE ■ AGC Kushanda ■ Burst Mode Operation ■ Laser Type: FP kana DFB ■ -20dB Yekuedza Port ■ 12VDC Simba Adapter ■ LED Zviratidzo zveMagetsi ON, Input Simba uye Kudzorera Tx Zvishandiso ■ CATV, HFC network ■ RF pamusoro peGirazi Tsananguro ZBR103A compact optical node ndiyo ipuratifomu yakakodzera yekushandisa muFTTH uye FTTB network, kuendesa kumusoro nekudzika DOCSIS, izwi, vhidhiyo uye nekukurumidza data data pamusoro peFTTX kunyorera. ZBR103A ine otomatiki kuwana kutonga uye kuputika modhi basa, inoenderana ne ...
FTTH Passive Photoelectric Shanduri ZHR28PD
Zvimiro 1.Operation bandwidth: 45 ~ 1000MHz; 2.when iyo yekuisa magetsi emagetsi iri -1dBm: Analog chiratidzo: iyo inobuda magetsi emagetsi iri 67dBµV (OMI = 4%); Dhijitari chiratidzo: iyo inobuda magetsi emagetsi iri 61dBµV, MER> 38dB (EQ YAKADZWA); 3.When iyo yekuisa magetsi emagetsi iri -10dBm: Dhijitari chiratidzo: iyo inobuda magetsi emagetsi iri 43dBµV, MER> 30dB (EQ YAKADZWA); inokurudzirwa iyo yekuisa simba emagetsi akasimba renji ndeye -10 ~ 0dBm. Ichi chigadzirwa chine imwe F-mhando RF kuburitsa chiteshi, Metric kana Imperial iyo inotsanangurwa ne ...
Passive Optical Mugamuchiri
Tsanangudzo ZHR10P akateedzana CATV inoshandura yedhijitari terevhizheni, fiber kumba. Muchina uyu unoshandisa iyo yepamusoro senzwi yekugamuchira chubhu, isina magetsi, pasina simba rekushandisa. Izvo hupfumi, inoshanduka kusanganisa kusangana, kunyorera fiber kune yekumba network. Kune mashanu marudzi emhando yekusarudzwa kwemodheru: Zvimiro Operation bandwidth: 45-1000MHz; (1) Kana iyo yekuisa magetsi emagetsi iri - 1dBm: signal Analog signal: iyo inobuda simba remaoko iri 68dBuV (OMI = 4%); ② Chera ...
FTTH Passive Optical Mugamuchiri ZHR10B
1.Overview ZHR10B akateedzana CATV inoshandura yedhijitari terevhizheni, fiber kumba. Ini muchina wake unotora iyo yepamusoro senzwi inogamuchira chubhu, isina magetsi, pasina simba rekushandisa. Kana iyo yekuisa magetsi emagetsi anoburitsa nhanho Pin = -1dBm, Vo = 68dBuV, inogona kuve yezvehupfumi uye inoshandisika kuisa kubatanidzwa kwematerevhizheni matatu, fiber kune yekumba network application. ZHR10B kutaridzika kweiyo enamel, kune maviri marudzi e optical akagadzirwa sarudzo. 2Feature 1) Hapana Simba rinodiwa 2) Shanda bandwidth ...
FTTH mini Optical Mugamuchiri neWDM
Tsananguro ZHR1000PD ndeye mini indoor Optical inogamuchira inovaka muWDM, yakagadzirirwa FTTP / FTTH kufambisa kunyorera. Inopa yakanakisa frequency uye yekukanganisa mhinduro ine yakaderera ruzha, yakakwira RF kuburitsa, uye yakaderera simba kushandiswa. Iyo imwe chete mode fiber-yenguruve yakarongedzwa uye inowanikwa nemhando dzakasiyana dzekubatanidza. Inowanikwa Hapana Chinongedzo Chidimbu 1 RF OUT RF OUT1 F chinongedzo 2 RF OUT2 sarudzo 3 PWR Simba adapter doko 4 PON 1490 / 1310mn dhata interface SC / PC ...
ZHR1000P akateedzana FTTH Optical inogamuchira ine yakakwira mashandiro, yakaderera inogamuchira magetsi emagetsi uye yakaderera mutengo kune maCATV vanoshanda vanopa mhando yepamusoro uye yakanakisa FTTH network mhinduro. ZHR1000PD kunyanya dhizaini yeFTTP / FTTH kunyorera. Kuita kwepamusoro, yakaderera inogamuchira simba remahara uye yakaderera mutengo ndeye FTTH mhinduro yakanyanya kusarudzwa yeMSO. WDM inosanganisirwa 1550nm vhidhiyo chiratidzo uye 1490nm / 1310nm data chiratidzo mune imwe fiber. Kufungisisa 1490nm / 1310nm yekubatanidza ONT mudziyo. Ivo vakakodzera kwazvo ...
Rondedzero ZHR1000MF Mini Optical node yakakwira mukuita, yakanaka mukuvimbika, yakaderera mushandisiro yemagetsi diki vhoriyamu, uye yakanaka kune network yeFiber To Iyo Node / Fiber KuKumba (FTTH). Maitiro • Nebhendi firita uye chete pfuura 1550nm. • Kakawanda 40MHz -1002MHz. • Gallium arsenide gudzazwi inoshandiswa ine yakanaka performance index. • Kune metric system (kana Chirungu system) radio frequency kuburitsa chiteshi uye DC12V ~ 15V yakazvimirira DC magetsi poti chiteshi. • Small aruminiyamu ikafa chakakandirwa casing, ...
Parameter Optic Feature CATV Kushanda wavelength nm 1260 ~ 1620 1540 ~ 1563 Pass wavelength nm 1310 uye 1490 Channel Isolate dB ≥40 1550nm & 1490nm Responsibility A / W ≥0.85 1310nm Kugamuchira simba dBm ≥0.9 1550nm & 1490nm + 2 ~ -10 alog Analog TV (CN) Optical kudzoka kurasikirwa dB + 2 ~ -20 Dhijitari TV (MER-29dB) ≥55 Optical fiber connector SC / APC LC / APC RF Feature Work Bandwidth MHz 47-1002 ...